WR PUBG my Hack Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack-Gamepron
WR IPUBG kugula
Ungazikhathazi nangayiphi na indlela yabanye ababeki onokuyifumana kwi-intanethi. I-GamePron ineyona PUBG ilungileyo kwaye iya kukunceda uphumelele kwimidlalo emininzi njengoko uthanda.
Fumana incasa encinci yokuba kunjani ukuphumelela-Thenga isitshixo seMveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje!
Sukubamba umva kwaye uvumele abachasi bakho ukuba bazive becinezelwa-Thenga into eyi-1 yeveki yeMveliso namhlanje!
Ngaba awufuni kukhathazeka malunga nokuphulukana nokufikelela kwiGamePron? - Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Thenga isitshixo semveliso namhlanje kwaye ufumane ukufikelela kwangoko kwi-PUBG WR cheat. Akukho lindelo libandakanyekileyo- ungangena ngqo kuwo!
PUBG WR ulwazi lomnqweno yimfumba
Iphuhlisiwe Windows 10, IPUBG WR sesona sisombululo sisiso somnqweno wakhe nakubani na onomdla kwiMidlalo yoMdlali engaziwayo. Zininzi cheats onokukhetha kuzo, kodwa bambalwa abaza kudibana nemigangatho efumaneka apha kwiGamePron. Ii-CPU ezixhaswayo zokukopela zi-Intel kunye ne-AMD, kwaye ngelixa itshixiwe i-HWID, unikwa ukufikelela kwi-HWID Spoofer. Isebenza nakweyiphi na inguqulelo yePUBG kwaye ilungele bonke abasebenzisi bethu abadlala iPUBG- ke kwixesha elizayo xa udlala kwaye ufuna ukuphatha ukhuphiswano lwakho njengabantwana, vumela iPUBG WR hack yethu.
Uninzi lweempawu ozithandayo kwezinye izixhobo zethu zisekhona apha. Ungafumana uMdlali / into ye-ESP efakwe ngaphakathi, kunye neLwazi loMdlali. I-PUBG Aimbot eza nesi sixhobo ayinasiphene, kwaye uza kusebenzisa iMinimap / 2D Radar yethu.
Umdlali we-ESP (Amathambo)
Ulwazi lomdlali (umgama, iMpilo)
Ubuncinci beRadar ye-2D
Malunga nePUBG WR
Senze esi sixhobo ukuba sisetyenziswe Windows 10 iinkqubo, kwaye izakuxhasa ii-Intel kunye nee-CPU ze-AMD. Kuza kuphela ngesiNgesi, kwaye akunamsebenzi ukuba ujongene nesibhengezo sehardware, njenge
Esi sixhobo siquka nesiphawuli seHWID. Ubungqina bemifudlana, ngoko unokuyisebenzisa ngelixa usasaza bukhoma kwaye ababukeli ngekhe babe nofifi! Ungangena kwimowudi eskrinini esipheleleyo ngale PUBG WR ukukopela ngokunjalo, ke akukho mfuneko yokuba uzabalaze ukuze ubone okwenzekayo kwiscreen kwimowudi yewindows. Akunzima ukuyisebenzisa kwaphela, konke okufuneka ukwenze kukubhalisa usebenzisa umlayishi kwaye ulandele imiyalelo.
Kutheni usebenzisa iPUBG WR ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Ngaba abanye ababoneleli bazobeka umthengi phambili, njengoko sisenza apha kwiGamePron? Kubonakala ngathi zininzi iinkampani ezahlukeneyo ezizama ukufumana "izandla" zazo kwi-honeypot. Ngombulelo, abasebenzisi sele besazi ukuba kukho indawo enye (kunye nendawo enye kuphela!) Abanokuphethukela kuyo kwi-PUBG cheats ethembekileyo. Ukuchitha imali kwisixhobo kuphela ukuze ikuyeke (kwaye kwezinye iimeko, ukucaphukisa) kunokuthintelwa. Konke omele ukwenze kukusebenza ngezixhobo ezifumaneka apha kwiGamePron kwindawo yokuqala.
Ukuba ufuna i-PUBG hack ethembekileyo engayi kukuthintela, ukukhangela kwakho kugqityiwe ekugqibeleni. Sebenzisa imenyu yethu yomdlalo oza kukuvumela ukuba uchaze useto lwakho lokuqhekeza, unike abasebenzisi ulawulo olupheleleyo malunga nendlela abafuna umdlalo uphume ngayo. Unokwenza zonke iimpawu zakho kwaye uzisonge ukuya kuthi ga kwi-max, okanye ukhe ujonge nangakumbi "i-finesse" kwaye uzame ukutsalela abachasi bakho kwimvakalelo engeyiyo yokhuseleko. Yenza ulwazi lwakho ngamava kunye nokungena kumnandi! Yiba lilungu leMidlaloPron namhlanje kwaye uza kubona ukuba kutheni abasebenzisi abaninzi bexhalabile malunga nee-PUBG hacks zethu.
A3. Obu buqhetseba bangaphandle ngenkxaso yesikrini esigcweleyo, esenza ukuba ihambeke lula
A5. Ewe, obu buqhetseba buxhasa isisombululo esigcweleyo kwisikrini.
I-GamePron ihlala ijolise ekukhupheleni ii-PUBG ezikumgangatho ophezulu, kutheni ungazibandakanyi neqela? Thenga isitshixo semveliso namhlanje kwaye ubone ukuba kutheni abasebenzisi beMidlaloPron phantse bengathinteki.
Ilindelwe Lawula PUBG WR yethu kugula?